Sawiradii birta ahaa ee cajiibka ahaa ee Gil Bruvel | Abuurista khadka tooska ah
Wuxuu ku dhashay magaalada Sydney (Ustaraaliya) 1959, laakiin wuxuu ku koray koonfurta Faransiiska. Gil burruvel bilaabay tijaabinta farshaxanka at 9 sano isaga iyo aabihiis, xubin golaha wasiirada ah oo loo yaqaan Gil in farshaxan qoryaha iyo kan naqshadeynta qalabka guryaha, wuxuu aqoontaas ku dabakhay naqshadihiisa farshaxan ee sanamyo sannado ka dib. 1974, Gil wuxuu bilaabay waxbarashadiisa aqoon isweydaarsiga dib u soo celinta farshaxanka ee Chateaurenard, France, wuxuuna wax ku bartay M. Laurent de Montcassin, isagoo bartay farsamooyinka sayidyadi hore iyo kuwa casriga ah , iyo waliba taariikhda fanka ee qarniyadii 14aad ilaa 20aad.
Tan iyo markaas ka dib, wuxuu ka aasaasay istuudiyaha St Remy de la Provence, illaa 1986 markii ugu horreysay ee uu wax ka qabto Mareykanka, tan iyo markaasna wuxuu leeyahay deganaansho rasmi ah ilaa 1990.
Mid kasta oo ka mid ah waayo-aragnimadiisu waxay bartay inuu jecel yahay aqoonta farshaxanka, iyo sidoo kale inuu si joogto ah u horumariyo siyaabo cusub oo loo baadho loona ballaariyo hal-abuurkaaga.
Anigu waxaan ahay fanaan, maadaama ay tahay marinka siideynta fikradaha iyo muuqaalada aan sito maalin kasta. Tan iyo caruurnimadaydii waxaan sii waday sahamintaydii hal abuurnimo ee salka ku haysay maskaxda miyir la'aanta ah, waxaanan ku barbaariyey tababar maalinle ah anigoo adeegsanaya noocyo kala duwan oo farshaxanimo ah. Aad ayaan u xiiseeyaa taxanaheyga cusub ee dareeraha, dareenka xad dhaafka ah ee leh muujinta kala duwan, halka aan ku dareemayo sida markii aan bilaabay, anigoo ku fakaraya inaan u isticmaalo cajalado khadadka tamarta si aan u muujiyo isgoysyada adag ee quruxda iyo xanuunka, gudaha iyo dibedda, ephemeral iyo weligiis, in ay awoodaan in ay la kulmaan maalin kasta.
Fuente [Gil burruvel]
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawirada birta ah ee cajiibka ah ee Gil Bruvel
Sawirada Surreal waxay muujinayaan xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo dabeecada Igor Morski